कहाँ बसेर चलाउदैछन् ट्वीटर ? ‘मोस्ट वान्टेड’ को सूचीमा रहेका सिलवालले फेरी गरे अर्को ट्वीट !
आइजीपी बढुवासम्वन्धी कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सलवालले आफूविरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि नेपालमा निरंकुश शासन कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सिलवालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा कानून र शासनको खिल्ली उडाएर शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई जनताले दण्डित गरिसके पनि अझै निरंकुश शासन शैली कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भनेका छन्, ‘कानूनको शासनको खिल्ली उडाएर शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई जनताले दण्डित गरिसकेका छन् । अझै पनि उसको निरंकुश शासन शैली कायमै छ ।’
आइतबार नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा सिलवाललार्इ खोजी गर्न इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिस पछि अभियुक्तलार्इ सिलवाललार्इ जुनसुकै मुलुकका प्रहरीले पूर्व पक्राउ गर्न सक्छन् । नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेका अपराधिलार्इ पक्राउ गर्नको लागि यो नोटिस इन्टरपोलले जारी गर्ने गरेको छ ।
सिलवालले यसअघि पनि ट्वीटबाटै सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफूविरुद्ध प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको डटेर सामना गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका थिए ।
यसअघिकाे ट्विटरमा उनले लेखेका थिए, ‘म जनताको प्रतिनिधि हुँ र कानूनको परिपालक एक जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ । समय सकिन लाग्यो भन्ने हतारोमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न शक्तिको गलत प्रयोग गरी आफ्नो विपक्षीलाई प्रहार गर्ने जुन नौटंकी प्रदर्शन हुँदैछ, सत्यको जगमा त्यसको डटेर सामना हुनेछ ।’
तर उनि कहाँ बसेर ट्वीटर चलाउदैछन भन्ने बारेमा प्रहरीले समेत पत्ताे पाउन सकेकाे छैन ।
यसैबीच सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको समाचारप्रति नेकपा एमालेले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
रातको समयमा चिहानमा बसेर युवाहरु संग बसेर बियर खाने चुडेल भिडियामा, खुलाईन यस्तो रहस्य ( भिडियो)